Izindaba - Ipuleti elijwayelekile lephepha lokucindezela isihlungi
Isihlungi se-Automat Press NgeTilting Device
Okuzenzakalelayo Overhead Beam Hlunga Cindezela
Chamber Filter Cindezela
Cindezela Isihlungi Esizenzakalelayo Ngokuzenzakalelayo
Isihlungi Esivula Ngokushesha Ngedivayisi Yokudlidliza
Isihlungi Sokuzenzakalelayo Esigcwele
High Pressure ulwelwesi Hlunga Cindezela
Plate futhi Uzimele Hlunga Cindezela
Ukucindezela Okuncane Kwelebhu
Iphutha lepuleti elijwayelekile nomshini wokuhlunga wohlaka
Ipuleti nefreyimu yesihlungi cindezela imishini yokwelashwa kwendle ohlelweni lokwelashwa kwendle. Umsebenzi wawo ukuhlunga udaka ngemuva kokuphathwa kwendle ukwakha ikhekhe elikhulu lokuhlunga (ikhekhe lodaka) ukuze lisuswe. Ipuleti kanye nohlaka lokucindezela isihlungi kuqukethe ipuleti yokuhlunga, uhlelo lwe-hydraulic, ifreyimu yokuhlunga, uhlelo lokuhambisa ipuleti lokuhlunga kanye nohlelo lukagesi. Umgomo wokusebenza wepuleti nohlaka lokucindezela isihlungi ulula. Okokuqala, ipuleti neqembu lozimele licindezelwe ngamandla we-hydraulic, futhi udaka olungenisiwe lungena ukusuka phakathi bese lusabalalisa phakathi kwendwangu yokuhlunga.
Ngenxa kokucindezelwa kwepuleti nohlaka, udaka alukwazi ukugcwala. Ngaphansi kwengcindezi ephezulu yesikulufa futha nepompo le-diaphragm, amanzi asodakeni aphuma endwangu yokuhlunga bese egelezela kupayipi lokubuyisa, ngenkathi ikhekhe lodaka lishiywa emgodini. Ngemuva kwalokho, ingcindezi yepuleti nohlaka kuyehliswa, ipuleti lokuhlunga lidonswe livuleke, bese ikhekhe lodaka liwela ngamandla adonswe yimoto. Ngakho-ke, inqubo yokucindezela isihlungi inqubo yokugcina yenqubo yokuphathwa kwendle.
Ukulimala kwepuleti uqobo. Izimbangela zokulimala kwepuleti zimi kanje:
1.Lapho udaka lukhulu kakhulu noma ibhulokhi elomile lisele ngemuva, itheku lokudla lizovinjelwa. Ngalesi sikhathi, akukho okuphakathi phakathi kwamapuleti wokuhlunga, futhi kuphela ingcindezi yohlelo lwe-hydraulic uqobo olusele. Ngalesi sikhathi, ipuleti ngokwalo lilimele kalula ngenxa yengcindezi yesikhathi eside.
Lapho ukwaziswa kunganele noma kuqukethe izinhlayiya eziqinile ezingafanele, ipuleti nohlaka uqobo kuzolimala ngenxa yamandla amaningi.
3.Uma isitolo sivinjiwe ngokuqinile noma i-valve yokuphakelayo noma i-valve yokuthengisa ivaliwe lapho kuqala, ayikho indawo yokuvuza kwengcindezi, okuzodala umonakalo.
4. Lapho ipuleti lokuhlunga lingahlanzwa, kwesinye isikhathi okulingene kuzovuza. Lapho sesiphumile, emaphethelweni epuleti nohlaka kuzogezwa kukodwa ngakunye, futhi inani elikhulu lokuvuza okuphakathi kuzodala ukuthi ingcindezi ingenakwanda futhi ikhekhe lodaka alikwazi ukwakhiwa.
Izindlela ezihambisanayo zokuxazulula inkinga:
Sebenzisa i-nylon yokuhlanza isisindo ukususa udaka echwebeni lokuphakelayo
2.Qedela umjikelezo bese unciphisa ivolumu yepuleti yokuhlunga.
3.Hlola indwangu yokuhlunga, hlanza indawo yokuphuma yamanzi, uhlole indawo yokuphuma, uvule i-valve ehambisanayo bese ukhulula ingcindezi.
4. Hlanza ipuleti lokuhlunga ngokucophelela bese ulungisa ipuleti lokuhlunga
Ubuchwepheshe bokulungisa ipuleti yesihlungi bumi kanje:
Ngemuva kokusebenzisa iminyaka eminingana, ngasizathu simbe, imiphetho namakhona wepuleti lokuhlunga kuyasuswa. Lapho nje amamaki emisele evele, azokwanda ngokushesha kuze kuthinteke ukwakheka kwekhekhe lokuhlunga. Ekuqaleni ikhekhe liba ntofontofo, bese liba slimy semi, futhi ekugcineni ikhekhe alikwazi ukwakhiwa. Ngenxa yento ekhethekile yepuleti yokuhlunga, kunzima ukuyilungisa, ngakho-ke ingashintshwa kuphela, okuholela ekubizeni okuphezulu kwezingxenye zokungcebeleka. Izindlela ezithile zokulungisa zimi kanje:
1. Hlanza inkatho, uvuze indawo entsha, ungasebenzisa i-saw blade encane ukuhlanza
2. Okumnyama nokumhlophe izinhlobo ezimbili zomenzeli wokulungisa ngokuya ngesilinganiso sika-1: 1
3. Faka i-ejenti yokulungisa elungisiwe emgodini, bese ufaka okuthe xaxa kancane
4. Setha masinyane indwangu yokuhlunga, khama ipuleti lokuhlunga ndawonye, ​​yenza i-ejenti yokulungisa nendwangu yokuhlunga inamathele ndawonye, ​​bese ukhama umsele ngasikhathi sinye
5. Ngemuva kokukhishwa isikhathi esithile, i-viscose ngokwemvelo iyakheka futhi ayisashintshi. Ngalesi sikhathi, ingasetshenziswa ngokujwayelekile.
Izimbangela eziyinhloko zamanzi asephepheni lamanzi phakathi kwamapuleti nozimele zimi kanje:
1. Ukucindezela okuphansi kwe-hydraulic
2. Songa futhi ugobe endwangwini yokuhlunga
3. Kukhona izigaxa ebusweni bokubekwa uphawu.
Indlela yokwelashwa yamaphepha wamanzi phakathi kwamapuleti nozimele ilula, inqobo nje uma ukwanda okuhambisanayo kwengcindezi ye-hydraulic, ukumiselela indwangu yokuhlunga noma ukusetshenziswa kwesikhuhli senayiloni ukususa ibhulokhi ebusweni bokuvala.
Isihlungi ikhekhe akhiwa noma engalingani
Kunezizathu eziningi zalesi simo, njengokudla okwanele noma okungalingani kwekhekhe. Ngenxa yamaphutha la, kufanele siphenye ngokucophelela izimbangela, bese ekugcineni sithole inkinga ngqo, bese silashwa ngezimpawu ukuxazulula inkinga. Izixazululo eziyinhloko yilezi: ukwandisa okuphakelayo, ukulungisa inqubo, ukwenza ngcono okuphakelayo, ukuhlanza noma ukufaka esikhundleni sendwangu yokuhlunga, ukuhlanza ukuvimba, ukuhlanza imbobo yokuphakela, ukuhlanza umgodi wokukhipha amanzi, ukuhlanza noma ukufaka indwangu yokuhlunga, ukwandisa ingcindezi noma ipompo amandla, ukuqala ngokucindezela okuphansi, ukwandisa ingcindezi, njll.
Ipuleti lokuhlunga lihamba kancane noma kulula ukuwa. Kwesinye isikhathi, ngenxa kawoyela omningi nokungcola kwinduku yokuqondisa, ipuleti lokuhlunga lizohamba kancane lize liwe. Ngalesi sikhathi, kuyadingeka ukuthi uhlanze induku yomhlahlandlela ngesikhathi futhi usebenzise igrisi ukuqinisekisa ukuthambisa kwayo. Kumele kuqashelwe ukuthi akuvunyelwe ngokuphelele ukufaka uwoyela omncane kwinduku yomhlahlandlela, ngoba uwoyela omncane mncane uwela kalula, okwenza phansi kushelele kakhulu. Kulula kakhulu ukuthi izisebenzi ziwele phansi ngenkathi kusebenza nokunakekelwa lapha, okudala izingozi zokulimala komuntu.
Umfutholuketshezi uhlelo ukwehluleka.
Uhlelo lokubacindezela lwepuleti nohlaka lokuhlunga cindezela ikakhulukazi lunikeza ingcindezi. Lapho umjovo kawoyela egumbini likawoyela unyuka, ipiston iya kwesobunxele ukucindezela ipuleti lokuhlunga ukuze likwazi ukungena emoyeni. Lapho kufakwa uwoyela omningi egumbini lamafutha B, ipiston iya kwesokudla bese kukhishwa ipuleti lokuhlunga. Ngenxa yokukhiqizwa ngokunemba, ukwehluleka kohlelo lwe-hydraulic kuncane, inqobo nje uma unaka ukunakekelwa okujwayelekile. Noma kunjalo, ngenxa yokuguga, ukuvuza kukawoyela kuzokwenzeka minyaka yonke noma kunjalo. Ngalesi sikhathi, i-O-ring njengoba kukhonjisiwe kulesi sibalo kufanele ilungiswe futhi ishintshwe.
Amaphutha ajwayelekile wokubacindezela ukuthi ingcindezi ayikwazi ukunakekelwa futhi isilinda se-hydraulic asikulungele ukuqhuma. Izizathu eziyinhloko zokungayigcini ingcindezi ukuvuza kukawoyela, ukugqokwa kwe-O-ring nokusebenza okungavamile kwe-valve ye-solenoid. Izindlela ezijwayelekile zokwelashwa ukususa nokuhlola i-valve, ukufaka i-O-ring esikhundleni sayo, ukuhlanza nokuhlola i-valve ye-solenoid noma ukufaka enye i-valve ye-solenoid. Ukuqhuma okungafanele kwesilinda se-hydraulic kusobala ukuthi umoya uvaliwe ngaphakathi. Ngalesi sikhathi, inqobo nje uma uhlelo lupompa umoya, lingaxazululwa ngokushesha.
Isikhathi sokuthumela: Mar-24-2021
I-Hangzhou Filter Machinery Equipment Co, Ltd ingumkhiqizi wokucindezela isihlungi, ikhiqiza izinhlobo ezigcwele zemishini yokuhlunga nezinsiza.